प्रेम पत्र… – Tandav News
ताण्डव न्यूज द्वारा	 २०७५ फाल्गुन २ गते बिहीबार १३:१० मा प्रकाशित
कुशल छु र कुशलताकै कामना गर्दछु । सम्झनाका तरेलीहरूमा तरङ्गित शब्द माला उनिरहेको छु । तिमीलाई बिर्सन त कहिले पो सकेको थिएँ र न सकेको छु अनि न सक्ने छु । सम्झनभन्दा पनि बिर्सन पो गाह्रो लाग्न थालेको छ अचेल मलाई ।
तिमीले पनि भुलेकी छैनौ होला भन्ने झिनो आशा छ मेरो मनमा । प्रविधिको युगमा पनि पत्र कोरेर किन बसेछ भनौली रेडियो सुनिरहेकी भए । माया गर्ने मान्छेको नम्बर पनि सम्झन नसकेर सेभ गर्नु पर्छ त भन्दै सेभ गरेको नम्बर फालिदिएर कण्ठ गर्न बाध्य बनाएकी थियौ त्यसैले अझै पनि तिम्रो मोबाइल नम्बर मष्तिस्कको मेमेरीबाट डिलेट भएको छैन अर्थात् बिर्सिएको छैन तर फोन लाग्दैन सायद सिम फेर्यौ होला । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पनि धेरै खोजेँ तर भेटिइनौ र भरपर्दाे सञ्चारको माध्यम पत्रको सहारा लिएको हुँ ।
पोखरा कै सुन्दर परिवेशमा छु तर पनि तिम्रो उपस्थितिमा जस्तो सुन्दर लाग्दैन पोखरा, लोभ्याउँदैनन् यहाँका ताल तलैया हिमाली दुृश्य अनि हरिया अरण्यले पनि । तिमीलाई भेटेको दिन स्मृतिमा ताजै छ । जुन दिन तिमीलाई भेटेँ त्यसदिन बिहानैदेखि मौसम खुलेको मात्र थिएन मनमा एक किसिमको उमङ्ग र शरीरमा स्फुर्ति पैदा भइरहेको थियो सायद तिमीलाई भेट्ने शुभ सङ्केत थियो त्यो ।
क्याम्पसको पहिलो दिन, कल्पना गरेको थिइन आजसम्म कसैसँग आँखा नजुधेको मेरो स्नातकोतर तहमा आइपुगेपछि आँखा जुध्ला मन पराइएला तर त्यही भयो । खुसी तिम्रो नाम जस्तै तिमी र तिम्रो व्यवहार ।
सधैँ हँसिली कहिल्यै रिसाइनौ मेरो सामिप्यतामा त्यसैले नजर गयो सरल तिमीमा । सुरु भयो कक्षा पढाइसँगै जागिर मेरो , चाहेर पनि पुरै कक्षा लिन नभ्याइने । हेराहेर पछि गफगाफ सुरु भयो तिमीसँग ।
दृष्टिकोण नै खराब भए त परिदृश्य कसरी सुन्दर लाग्दो हो ? तिमी सरल त थियौ नै सुन्दर थियौ कि मेरो हेराइ नै त्यस्तै हो म जान्दिन जे होस् मन पराएँ तिमीलाई । पछि नोट सार्न कापी मागेको तिमीले नाइनास्ती नगरी दियौ पनि ।
सुरु भयो निकटता पछि मेरो व्यस्तता बुझेर तिमीले नै मेरो नोट गरिदिन थाल्यौ । सायद यहीँबाट सुरु भएको थियो हाम्रो प्रेम यात्रा । कापी मै साटियो मोबाइल नम्बर । गफगाफ हुन थाल्यो बिस्तारै अनि घुम्न जाने प्रताब ग¥यौ तिमीले सहर्ष स्वीकारे मँैले । सराङकोट जाने निधो पछि आजकै दिन तिमीलाई आफूले माया गर्ने कुरा भनेको थिएँ मैले ।
तुरुन्तै त तिमीले केही भनिनौ रिसले हो या लाजले तिम्रो मुहारमा लाली छाएको थियो । घुमेर फर्केपछि बेलुकी तिमीले फोनमार्फत मेरो प्रस्तावप्रति समर्थन जनायौ । म यति खुसी भएँकी त्यति खुसी म आजसम्मको कुनै प्राप्तिमा पनि भएको छैन । त्यसपछि साँच्चै सपनी या विपनी तिम्रै प्रतिबिम्ब घुम्न थाल्यो नयन वरपर ।
पवनले पनि तिमै्र सुवास बोकेर आए झैँ लाग्न थाल्यो । घामको न्यानो या जुनको शीतलता सबैमा तिमी पाउन थालेँ । सायद प्रेम भएपछि सबै वस्तु सुन्दर लाग्दो रहेछ क्यारे । तिम्रो निकटताले हिजोको मेरो जीवन र जगत् प्रतिको दृष्टिकोण नै बदलियो । सुनेको थिएँ प्रेममा अनौठो शक्ति हुन्छ । यथार्थ लागिरहे छ आज आएर अनि सम्बोधन गरिरहेछु प्रेमलाई आस्था, विश्वास, शाहस र समर्पण भनेर ।
पढाइ राम्रै थियो हामी दुबैको । भेटघाट बढ्दै गयो, एकदिन भनेकी थियौ ‘मुना मदन, रोमियो जुलियट यिनै आदर्श प्रेम जोडीभन्दा अझै पृथक, अनुकरणीय प्रेमिल संसार सजाउँला । तिमी कलम म कापी , तिमी मुटु म धड्कन, तिमी नसा म रगत बनेर जगत्मा रमाउँला हुँदैन र ? प्रेम सफलताको उत्प्रेरणा भएकैले त यो अपरिहार्य छ ।’
सम्झना होला तिमीलाई पनि सराङ्कोटको उच्चता, फेवा, बेगनास र रुपाको गहनता अनि स्वच्छता,पावर हाउसको आकर्षक झरना, रानी वनको हरियाली, शान्ति स्तुपको शान्त, मनमोहक परिवेश नियालेका ती दिनहरुको । तिमी सेतीको गहनता अनि पाताले छाँगोसँगै गुप्तेश्वर र चमेरे गुफाको आश्चर्यजनक दृश्य देख्दा रमाएको सजीव तस्विर आँखा वरपरै घुमिरहन्छन् अचेल पनि ।
अचानक खै किन हो तिमी क्याम्पस आउन छाड्यौ । सम्पर्क गर्ने कोसिस गरे सम्पर्क पनि भएन, घर गयौ होला भन्ने सोचेँ तर तिमी पुनः कहिल्यै क्याम्पस आइनौ । मैले भने सधैँ तिम्रो प्रतीक्षा गरिरहेँ । तिम्रै आगमन कुर्दा कुर्दै क्याम्पसको पढाइ सकियो । खुसी ! मानिसको खुसीको पल क्षणिक हुँदो रहेछ सायद । त्यसैले मेरो खुसीको पल पनि क्षणिक नै बन्यो ।
निरासाका कालो बादल मडारिरहे धेरै दिनसम्म तिम्रो उनुपस्थितिमा । तिमीले अमिताभ वच्चनको शब्द सापटी लिएर भनेकी थियौ हार र जित त जीवनमा भइनै रहन्छ तर मन भने कहिल्यै हार्न हुँदैन । हो त्यही सम्झेर म जीवन धानिरहेछु ।
तिम्रो प्रेमलाई अर्थात् तिमीलाई नै जीवन सञ्चालनको आधार बनाएर म आँसुमा पनि हाँसो र असफलता भित्रै सफलता खोजेर अघि बढिरहेछु । खै थाहा छैन आज तिमी कहाँ के गर्दै कुन अवस्थामा छौ खुसी नै हौली सायद । तिमी मदेखि किन बेखबर छ्यौ म जान्दिन सायद कुनै विवशता होला तिमीमा ।
भन्नेहरु त भन्छन् प्रेमले पढाइलाई असर गर्छ तर मेरा लागि त तिम्रो प्रेम बाधक भएन बरु थप ऊर्जा बन्यो । अलेक्जेन्डर ग्राहमबेलले भने झैँ साँच्चै प्रेममा सफलताको ठूलो उत्प्रेरणा हुन्छ मैँले यही महशुस गरेँ किनकि तिम्रो केही समयको निकटताले पनि मलाई क्याम्पस टपर बनायो । तिमीले माया मात्र दिइनौ पढाइका निम्ति हौसला पनि दिइरह्यौ ।
केही समयको निकटताले त सफलताको यो ऊर्जा दियो भने जीवनभर सहयात्रा गर्न पाएको भए कति सफलता पछि लाग्थे होलान् तिमी आफैँ कल्पना गर त ? पहिले जस्तै चिठी पत्रकै चलन भएको भए बरु पक्कै रहन्थ्यो प्रेमिल पत्रहरु सिरानी मुनि तर सञ्चार प्रविधिले त्यो पनि रहन दिएन ।
तिमीले पठाएका मायालु म्यासेज र कुराकानीका रेकर्डहरु सबै फरम्याट भएछन् । केबल तिम्रो सम्झना तिमीले बान्की मिलाएर लेखेका तिम्रो अक्षरहरु छन् मेरो नोट कापीमा । मैले तिम्रो कापीमा लेखिदिएका भावनाहरु मध्ये म सम्झिरहेछु :
तिम्रो सुन्दर रुप देखेर जुनले हार मान्ला,
तिम्रो अघि चमक दिने सुनले हार मान्ला ।।
तिम्रो लवज गुनगुनाइ जब छुट्छन् ओठबाट
मादल, सारङ्गीका सारा धुनले हार मान्ला ।।
ईष्र्या गर्लान् परीहरु, डाँफे मयुरले
सुवास छर्ने चमेली त्यो फूलले हार मान्ला ।।
हो यही भावना जुन तिमीले पछि मलाई धेरै पटक पढ्न लगाएकी थियौ । चटपटेलाई दिइ नसकेको भए त्यो समाजशास्त्र विषयको नोट एक पटक हेर त ।
जे होस् बिर्सेकी छैनौ होला सायद ती दिनहरु । जहाँ छौ सुखी र नाम जस्तै रहनु । हुन त तिमीलाई मैले जीवन जिउन के सिकाउनु छ र तिमीले नै सिकाउँथ्यौ ऊ बेला मलाई । यो पत्र सुनिरहेकी छ्यौ भने मेरो नाम नम्बर सबै पुरानै छन् कृपया एक पटक सम्झ है । म तिम्रो हाल बुझ्न चाहन्छु । एकाएक किन हरायौ जान्न चाहन्छु यथार्थ ।
तिमीलाई पाइन भन्नेमा मेरो गुनासो छैन । पाएको कुराको भन्दा नपाएकै अर्थात् आफूसँग नभएकै कुराको महत्व बढी हुन्छ भन्ने मलाई थाहा छ । तिमी समीप छैनौ र त तिम्रो माया, तिम्रो महत्व भन् प्रगाढ बन्दै छ मनमा । खै पाएको भए त्यो कायम रहन्थ्यो या रहँदैनथ्यो म यसै भन्न सक्दिँन ।
दुर छौ र त सधैँ मन मुटुमा अमिट बनेर रहेकी छ्यौ यसै भनेर चित्त बुझाइरहेको छु म । पृथ्वी गोलो छ भन्छन् कुनै दिन कुनै मोडमा भेटियौ भने या तिमीले सम्झिएर सम्पर्क ग¥यौ भने धेरै कुरा गरौँला नि हुँदैन ? हस्त आजलाई यति नै ……………….
उही तिमीलाई हरपल